Banyere Anyị - Jiangsu Julong CNC Machine Ngwá Ọrụ Co., Ltd.
Jiangsu Julong CNC Machine Ngwá Ọrụ Co., Ltd.Is dị na "aka nke nākpacha aji na mpịachi igwe", Nantong hai 'ihe libao pụrụ iche na mmepụta nke akpacha ajị igwe, ekwe igwe, Rolling igwe, ígwè akpacha ajị igwe (mmanya akpacha ajị igwe), haịdrọlik igwe, uncoiling leveling akara. The ụlọ ọrụ na usoro nke ngwaahịa, kọmpat Ọdịdị, elu kpọmkwem, mfe iji rụọ ọrụ, anụ na-arụ ọrụ, mma ma a pụrụ ịdabere na, ọtụtụ-eji ígwè Rolling, ugbo elu ụgbọala, ụgbọ mmiri, ike, instrumentation, igwe anaghị agba nchara na ngwaahịa ndị ọzọ ọrụ.
The ụlọ ọrụ nwere ike oru ike na elu nhazi akụrụngwa, mmepụta na ule na ngwá zuru ezu, ngwaahịa iji mba ụkpụrụ mmepụta. N'ime afọ, o mere ka ibe ya bụrụ igwe ngwá ọrụ nnyocha na mmepe, a dịgasị iche iche nke oversize ngwaahịa a mụrụ n'ebe a, na otu ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ. Hydraulic akpacha ajị igwe, ekwe igwe, iwebata German technology, imewe na imewe nke ala eluigwe na ala igwe iwebata Japanese technology, dum igwe arụmọrụ ruru mba elu larịị, na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ mepụtara a usoro nke CNC ngwaahịa, anyị ngwaahịa ere ọma niile ná mba ọma exported ruo n'ebe ọwụwa anyanwụ Asia, Europe na United States na Middle East, dịwo mfọn anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ntá ego otuto.
Anyị ji obi anyị na-anabata nduzi nke ndị mba ọzọ na anụ ụlọ nsogbu azụmahịa ìhè ise, kpam kpam ihe mmepe, anyị pụrụ iche na-enye gị ihe kasị elu àgwà ngwaahịa na ọrụ ahụ. Ka anyị na-enye ndị ji ezi obi ute ọnụ, noro site na ugwu, mgbe nile ile "àgwà mbụ, ndị ahịa bụ onye kasị elu" bulie ndise, na-nwoke nke okenye udi tupu, nkịtị development. Otu imekọ ihe ọnụ, ebighi enyi!